बेरोजगारले भत्ता पाउने विधेयक संसदमा दर्ता, कसले कति पाउने?  Hamrosandesh.com
बेरोजगारले भत्ता पाउने विधेयक संसदमा दर्ता, कसले कति पाउने?
भदौ ७, काठमाडौं ।
सरकारले बेरोजगारलाई भत्ता उपलब्ध गराउनेसहितको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले दर्ता गराएको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा वेराजगार भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसके बेराजगारी भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ।
भत्ता पाउन वेरोजगार व्यक्तिले कयौं शर्त पनि पालना गर्नु पर्ने छ।
झुठो विवरण पेस गरी वेराजगार साहयता लिएमा सहायता बापत प्राप्त गरेको रकम असूल उपर गरी सोही बराबरको रकम जरीवाना गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।
कुनै नागरिकलाई इच्छा विपरीत, नचाहेको रोजगारी गर्न वा जबरजस्ती गर्न बाध्य बनाए पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म जरीवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यस्थलमा भेदभाव गरेमा वा रोजगारीबाट हटाएमा दश जारसम्मको जरीवाना रोजगारदातालाई गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।